» एसपी र मेयरबीच ‘दोहोरी’, ‘भैँसी बेच्न पनि प्रहरीलाई सोध्नुपर्ने ?
एसपी र मेयरबीच ‘दोहोरी’, ‘भैँसी बेच्न पनि प्रहरीलाई सोध्नुपर्ने ?
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १७:५७
तस्बीरः उज्यालो अनलाइन
बर्दिया । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा सतर्कताको विषयमा आइतबार सरोकारवालाको बैठक थियो । बैठक कोरोना रोकथामको लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काममा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर केही बेरपछि बैठक मोडियो मेयर र एसपीको चर्काचर्कीतर्फ ।